Umhla My Pet » Ngaba Ukutya Yenza Yonke Student Ulwalamano Lilungile?
Ngaba Ukutya Yenza Yonke Student Ulwalamano Lilungile?
ukubuyekezwa: Nov. 25 2020 | 2 min ukufunda
Ukutsibela umva eklasini kwinzululwazi kwisikolo sikarhulumente, xa wafunda eziyimfuneko ezibalulekileyo ebomini.
iintloko zethu bazaliswa ulwazi ngendlela thina bantu babantu ifuna rhoqo lomoya, amanzi kunye nokutya ukuze sisinde. qiniseka, umoya namanzi zibalulekile, kodwa abaninzi uhlobo yam kwimfuno enye ebalulekileyo ukuba ngenene ime ngaphandle ukutya. Kusenokwenzeka ukuba Mna lo 18 yindoda eneminyaka ubudala amaxesha ucinga kokuva kwakhe eziphambili njengoko ukutya, kodwa womoya umfundi ukutya ibamba amandla omkhulu.
Ukutya kusenza sibe zizityebi ezalisekisa kanti imali waziqhekeza, ukutya zihlobo kunye, ukutya unobangela wovuyo ngemihla kwaye nokwenza ngcono ubuhlobo umfundi.
Makhe ndinabe ...
Kaloku mna mbali edumileyo kodwa ndiqinisekile intle ukuba ukususela ekuqaleni kwexesha, ubudlelwane sele iqhutywe kwaye ziyakhula ngenxa yokutya.
Cavemen kunye cavewomen luqiniswe phezu iidinala nice inyanga elikhanyayo ye nomatse igcadiweyo namandongomane. The Viking Ixesha amajoni ixesha phakathi abathandi kwakusabiwa ngexesha nangamaxesha ekucebiseni. namhlanje, singatyi phandle umhla ikofu aya mhlawumbi kubandakanya ezinye uhlobo lokutya. Ufumana ingongoma.
Kummandla umfundi, ukutya nangoku kwesi sikhundla ngezikhundla kakhulu kubudlelwano.
Ipizza imela eyona ubhetyebhetye kwaye abanempembelelo ubudlelwane umdali lonke ixesha. Akufane intombazana iya kuthi hayi umhla ipizza intle (ingakumbi xa liza fella wawumhle). izijekulo Simple ezifana-odolo okanye selula ukubethwa ngumoya omhle zibase kwindawo pizza kuya kwenza nasiphi na ubuhlobo zikhula.
Yonke into nje wenza njalo lula kakhulu ngokutya.
Nokuba ngaba umhla wakho wokuqala okanye umhla wamashumi, ukuba lubandakanya ukutya ukuba bonwabele wena kunye neqabane lakho emva koko kuya kumpompoza ngcono iincoko, Uncumo ikhanye, izisu bakho zizele ulonwabo kokukhona indibaniselwano yakho iya kuphumelela.
Ukuba uhlala kwindlu isitovu ukusebenza, oveni, isixhobo sokurhawula isonka, microwave okanye ukufudumeza isibane unga inxaxheba kolu ekomelezeni ubudlelwane. Xa upheka ukutya kunye, okanye nibolekisana ukulungiselela ukusasazeka entle ezinye yakho ebalulekileyo iya kuba lixesha mnandi uze nisondelelane (nokuba izakhono zakho zokupheka zezi ecaleni nanye ... KD nangoku ukutya).
Oku kusizisa ubomi yokuhlala. Kukho nto intle ukuba bonke abafundi babe neplani isidlo baya kuqonda. Kunye uxande elula iiplastiki, umntu ukufumana imali kakhulu ukutya oko uziva ngathi iindleko encinane kakhulu. Swayipa, nidle, kwaye ukuba lula kuquka nomba ngokuthandana. izicwangciso ezininzi isidlo Unga kusetyenziswa lonke zekhampasi ezithile zokutyela zibase. Oku kudala ukufikelela lula sinesixhaso ngoko ke indlela elula ukuhlawulela uhambe ngemihla.
Kwihlabathi emfundo ephakamileyo, ukudla unokwenza naluphi na ubuhlobo umfundi lula, ngcono, kwaye eninzi nje kuhle kakhulu. Bathi uthando engafuniyo isizathu ... kodwa ukuba ufuna ukutya.
Yintoni Ngaba Abafazi olufunayo Man yabo efezekileyo?
umphezulu 5 Ukuzithethelela Ukuba Ungaqalisa ukuya Umhla
Olukhethekileyo Isipho Roses
Ezine Common Ulwalamano Iingxaki